FIKAMBANANA SILAMO MALAGASY: Tsy ho an’ny mpino silamo ihany ny Aïd El Fitr - Journal Madagascar
FIKAMBANANA SILAMO MALAGASY: Tsy ho an’ny mpino silamo ihany ny Aïd El Fitr
in ACTUALITE, Réligion, SOCIAL
Manatanteraka fety ny mpino silamo rehefa tapitra ny volana masina Ramadany. Nanomboka tamin’ity 2019 ity dia andro tsy fiasàna nefa handraisan-karama ny Aïd El Fitr. Arakaraka ny fisehoan’ny volana ny andro hanaovana azy io aorian’ny fahataperan’ny ramadany. Ny 5 jona 2019 no nanatanterahana ny Aïd El Fitr teto Madagasikara. Nambaran’ny filohan’ny FSM (Fikambanana Silamo Malagasy), Sheik Abdoul Had fa tsy ho an’ny mpino silamo irery ihany ny fety fa ho an’ny olona rehetra tsy ankanavaka. Ankoatra ny vahoaka mpino silamo dia nanasa tomponandraiki-panjakana, fikambanana hafa finoana… ny FSM nandritra ny fiarahana mivavaka ho fanamarihana ny Aïd El Fitr teny amin’ny kianja Mitafo Mahamasina. Hita teny an-toerana ny mpanorina ny fikambanana AKAMASOA, Père Pedro. Nilaza izy fa lalan-tsaina iraisan’ny mpino silamo sy ny kristianina ny fampiharana ny fifankatiavana sy ny firaisankina.
Natao hifehezana tena ny volana Ramadany: tsy misakafo, tsy misotro rano, tsy manao firaisana ara-nofo, tsy mifoka sigara, miala amin’ny fahazaran-dratsy. Fiovan-tena amin’ny lafiny fitondran-tena, fahaizana mitsinjo ny hafa, olona ivelany ny finoana silamo no tanjona. Araka ny fanazavan’ny mpino silamo dia betsaka ny valisoa omen’Andriamanitra ny rehefa mifehy tena.
Tags: Aïd El Fitrfikambanana silamo malagasy
FIKAMBANANA AFAMPO: Nahita hevitra hampivoarana ny maha olona